Posted on April 30, 2020 April 30, 2020 By myanmaryijin steelstructure
CategoriesEvents From Myanmar Yi Jin Steel Structure Co.,Ltd.
Previous PostPrevious Myanmar Yi JIn Steel Structure Co.,Ltd. မှ အပြင်ပဒံရပ်ကွက်အတွင်းရှိနေအိမ်အချို့အား ဆန်(၁ ပြည် + Face Mask ၅ ခုတစ်ထုပ်) အား 28.4.2020 နေ့တွင် လိုက်လံပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်းပုံရိပ်များ။
Next PostNext Myanmar Yi Jin Steel Structure Co.,Ltd. မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး လှိုင်သာယာ သို့ Suction Machine (1-Set) , PPE ဝတ်စုံ (50စုံ), Mask (2000ခု), Section Pipe (50ခု) တို့အား ပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်း။